« Ho any amin'iza izahay, Tompo? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. » Jo 6, 68
Ny vakiteny anio
Ny Olomasina anio
Fanazavana ny tolotra
Momba ny Evanjely
Afisy sy sary
Hanoratra ho anay
Handrindra ny famandrihana
ho fanohanana ny asa
MISORATA ANARANA !
Ampidiro ny adiresy email
Hamarino ny adiresy email
Ny vakiteny andro hafa asabotsy 12 mey 2018 alahady 13 mey 2018 alatsinainy 14 mey 2018 talata 15 mey 2018 alarobia 16 mey 2018 alakamisy 17 mey 2018 zoma 18 mey 2018 asabotsy 19 mey 2018 alahady 20 mey 2018 alatsinainy 21 mey 2018 talata 22 mey 2018 alarobia 23 mey 2018 alakamisy 24 mey 2018 zoma 25 mey 2018 asabotsy 26 mey 2018 alahady 27 mey 2018 alatsinainy 28 mey 2018 talata 29 mey 2018 alarobia 30 mey 2018 alakamisy 31 mey 2018 zoma 01 jiona 2018 asabotsy 02 jiona 2018 alahady 03 jiona 2018 alatsinainy 04 jiona 2018 talata 05 jiona 2018 alarobia 06 jiona 2018 alakamisy 07 jiona 2018 zoma 08 jiona 2018 asabotsy 09 jiona 2018 alahady 10 jiona 2018 alatsinainy 11 jiona 2018 talata 12 jiona 2018 alarobia 13 jiona 2018 alakamisy 14 jiona 2018 zoma 15 jiona 2018 asabotsy 16 jiona 2018 alahady 17 jiona 2018
Alarobia Fahatelo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Taratasin'i Md. Paoly ho an'ny Kolosiana 3,1-11.
Koa raha niara-nitsangana tamin'ny Kristy hianareo, dia ny zavatra any ambony, amin'izay itoeran'ny Kristy eo an-kavanan'Andriamanitra, no katsaho;
ny zavatra any ambony no ankafizo, fa aza ny zavatry ny tany.
Fa maty hianareo, ary miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainanareo;
fa rahefa hiseho ny Kristy izay fiainantsika, vao hiara-miseho aminy amim-boninahitra koa hianareo.
Koa ataovy maty àry ny rantsam-batanareo, dia ny an'ny ety an-tany, izany hoe: ny fijangajangana, ny fahalotoana, ny fahavetavetana, ny fanirian-dratsy, ary ny filan-dratsin'ny nofo izay fanompoan-tsampy;
fa izany rehetra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy finoana;
niara-nandeha tamin'ireny koa hianareo taloha fony hianareo nanaraka izany fiainana izany.
Fa ankehitriny kosa, ario kosa izao zavatra izao: dia fahatezerana, fahavinirana, fahasomparana, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra aloaky ny vavanareo;
aza mifandainga hianareo, fa efa narianareo ny olombelona taloha mbamin'ny asany,
ary efa notafinareo ny olom-baovao, izay havaozina ho amin'ny fahalalana lavorary araka ny endrik'ilay nahary azy,
ka tsy mahalala intsony izay hoe jentily na Jody, voafora na tsy voafora, baribariana na Sita, andevo na olona afaka, fa izao ihany: ny Kristy no zavatra rehetra ao amin'izy rehetra.
BETH Sitrako ny misaotra anao isan'andro, sy ny mankalaza ny anaranao mandrakizay doria!
GHIMEL Lehibe Iaveh ka mendrika ny fiderana rehetra, ary tsy takatry ny saina ny fahalehibeazany!
YOD Midera anao avokoa ny asanao rehetra, ry Iaveh, ary misaotra anao ny mpino anao.
Milaza ny voninahitry ny fanjakanao izy, ary mitory ny fahefanao;
mba hampahalalany ny zanaky ny olona ny asany mahagaga,
sy ny famirapiratry ny fanjakany be voninahitra.
Fanjakana mandrakizay ny fanjakanao
ary maharitra amin'ny taona rehetra ny fanapahanao.
Evanjely Masin'i Jesoa Kristy nosoratan'i Md. Lioka 6,20-26.
Tamin'izay, dia niatrana nijery an'ireo mpianany izy, ka nanao hoe: Sambatra hianareo mahantra, fa anareo ny fanjakan'ny lanitra.
Sambatra hianareo noana ankehitriny, fa ho voky hianareo. Sambatra hianareo mitomany ankehitriny, fa hifaly hianareo.
Ho sambatra hianareo raha hankahalain'ny olona, horoahiny amin'ny fikambanany, hotevatevainy ary holaviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo, noho ny amin'ny Zanak'olona.
Mifalia hianareo amin'izany andro izany ary miravoravoa, fa indro lehibe ny valisoanareo any an-danitra; fa tahaka izany koa no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany.
Fa loza ho anareo kosa, ry mpanan-karena, fa manana ny fahafaham-ponareo hianareo.
Loza ho anareo izay voky ankehitriny, fa ho noana hianareo. Loza ho anareo izay mihomehy ankehitriny, fa hitomany sy higogogogo hianareo.
Loza ho anareo raha hataon'ny olona tsara laza hianareo, fa tahaka izany no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany sandoka.
Baiboly Dikateny Malagasy 1938, nahitsin'ny Katolika.org -